Isilumkiso: Iplatifomu yeempendulo eqhutywa ngumvuzo | Martech Zone
Isilumkiso: Iplatifomu yeempendulo eqhutywa ngumvuzo
NgeCawa, ngoFebruwari 10, 2019 NgoMvulo, Februwari 11, 2019 Douglas Karr
Akukho mini idlulayo apho ndingaziswanga nge-poll, uphando, okanye ukubuza ingxelo. Ngaphandle kokuba ndonelisekile okanye ndicaphukile ngophawu, ndidla ngokususa isicelo kwaye ndiqhubeke. Ewe kunjalo, qho emva kwexesha, ndibuzwa ingxelo kwaye ndixelelwe ukuba kuyabulelwa kakhulu ukuba ndiya kuvuzwa.
Ukutya liqonga lengxelo elikuvumela ukuba uqokelele ingxelo ngokuvuza abathengi bakho. Bafumana amava awodwa e-gasified kwaye ufumana ingxelo ebalulekileyo oyifunayo. Iqonga liye labonwa njengenye yezona zinto zilula ukuzisebenzisa!
Ukuxhamla liqonga elipakishwe, kwaye kubandakanya:
Itemplate kunye nokudalwa kweBot -Sebenzisa iitemplate ezichazwe kwangaphambili okanye i-bot yethu yendalo ukuze ulungele kwimizuzu embalwa, akukho ngxaki. Yenza ilogo ibe yeyakho, umbala ophambili, ugqume umfanekiso ukuze ufumane umdlalo ogqibeleleyo wombutho wakho. Yenze eyakho ngokongeza idomeyini yesiko, umxholo wesingeniso, inowuthi ebhaliweyo kwaye utshintshe ulwimi. Unokwenza nokuba umphathi wakho enze uluhlu lomhla othile.
Zibandakanye nabathengi bakho -Thumela ii-imeyile ngokwezifiso kuluhlu lwakho, thumela isicatshulwa esenziwe ngokwezifiso kwiinombolo zefowuni, faka iwijethi entle kwindawo yakho okanye kwi-app yewebhu, okanye wenze i-PDF enokuprintwa onokuyithumela kunye neemveliso zakho ukuqokelela ingxelo.
Yenza iintlobo ezintlanu zemibuzo enentsingiselo Ukutya kuxhasa isicatshulwa esifutshane, amanqaku eNPS®, isilayida, ukhetho kunye neendidi zombhalo eziguquguqukayo. Ungabonisa imibuzo efanelekileyo kubasebenzisi abalungileyo ngokusekwe kukwaneliseka kwabo, okanye wenze ukuhamba okupheleleyo kwemibuzo ngokusekwe kwiimpendulo zangaphambili zomsebenzisi kunye neseti yeemeko ozichazileyo. Uyilo oluhle lweemifanekiso ziyafumaneka ukudala awona mava mahle, adlalayo.
Buyekeza abasebenzisi bakho -Nika amatikiti kunye neivawutsha ukukhuthaza ukuthengwa kwexesha elizayo ngelixa ulawula amathuba okuphumelela. Thumela iifayile zesiko ezinje ngomxholo okhethekileyo kubasebenzisi bakho kunye ne-imeyile yomvuzo abayifumanayo. Nokuba sisitshixo selayisensi, isimemo esikhethekileyo okanye naluphi na uhlobo lomyalezo wesiko, uFeeder uya kuthumela wona. Unokunikezela ngemali yokwenyani nge-Paypal yi-Feedier ngomda wokuhambisa kunye namathuba achaziweyo.
Thatha kwaye uqokelele uphononongo lomsebenzisi kunye nee-imeyile -Bonisa iqhosha lokulinganisa leenkwenkwezi ezi-5 kuphela kubasebenzisi abonelisekileyo nabazibandakanyileyo nakweliphi na iqonga elinjengeAmazon. Bonisa amaqhosha alandelayo kwinethiwekhi yakho oyithandayo ekupheleni kwamava engxelo. Fumana ubungqina obutsha ngokufumanisa abasebenzisi abonwabileyo kwaye ubabuze ukuba bakushiye ubungqina obupheleleyo kunye ne-imeyile yabo. Ukunyusa uluhlu lwakho lweendaba kuba ii-imeyile ziyafuneka ukuze ufumane umvuzo.
Phatha ingxelo ngokukodwa -Ukufumana ukutya kukuvumela ukuba unxibelelane nabathengi bakho ngokuthe ngqo kwi-imeyile yabo nakwiCRM yakho. Ingxelo epheleleyo yakhelwe nayiphi na ingxelo ukuze uqonde nawuphi na umthengi ngonqakrazo olunye. Iphepha lemivuzo likuvumela ukuba ufikelele kuluhlu lwemivuzo ehanjisiweyo ukuze ungene ngokuthe ngqo.
Uhlalutyo olunamandla -Kubandakanya isixhobo esisetyenzisiweyo, isikhangeli, igrafu yexesha, iimpendulo, ukwaneliseka, inani lamava angeniso, undwendwelo, amazwe aphambili, ixesha eliphakathi, kunye ne-NPS. Igama eliphambili lokuphanda ukunceda ukuba uphonononge zonke iimpendulo zakho ngokujonga amagama athile aphambili.
Izixhobo zoLawulo -Thumela ingeniso yengxelo ehambelana neefilitha zakho eziguqukayo kwiCSV okanye .JSON ngonqakrazo olunye. Lawula iqela lakho ngeendima ezahlukeneyo ukuze ufumane uninzi lwentsebenziswano njengoko kufuneka ukusebenza kunye. Fumana izaziso malunga nokuqhubekayo kwiakhawunti yakho yoLonwabo kunye neengxelo zeveki ngeenkcukacha.
Umdibaniso oMninzi -Umlondolozi unexwebhu elibhaliweyo le-JSON REST API ukuvumela umphuhlisi wakho ukuba ahlangane namaqonga akho kunye nezixhobo. Yakha i-Zapier ZAPs kunye neZinto ezibangela ukuba wenze izinto zakho nanini na ufumana ingxelo. Fumana umthwalo ohlawulelwayo we-JSON kwi-URL yakho yewebhu yewebhu nanini na xa ingxelo ifunyenwe nazo zonke iinkcukacha zayo.
Kwaye, kuba Martech Zone abafundi, nantsi 20% ikhuphoni lesaphulelo xa ubhalisa ngekhowudi yenyuselo WELCOMEFEEDIER2018.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lethu lokudibana ukuze kulungele eli nqaku.
Uyenza njani iSicwangciso-buchule seNtengiso seFacebook saseKhaya